नेपाल आज | ‘चिनियाँ खर्च’मा वाम गठबन्धन बनेको हो (भिडियोसहित)
‘चिनियाँ खर्च’मा वाम गठबन्धन बनेको हो (भिडियोसहित)
आइतबार, १० मङि्सर २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
काठमाडौं । जलसरोकारका विज्ञ अरुणकुमार सुवेदी आन्तरिक राजनीतिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, कुटनीतिक सम्बन्धजस्ता विषयमा सटिक र चोटिलो टिप्पणी गर्नु हुन्छ । उहाँको विश्लेषणलाई समर्थन गर्नेहरु पनि उल्लेख्य छन् । यद्यपि उहाँका आलोचकहरु पनि नभएका होइनन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पछि एमाले र माओवादीले मुलुकमा सर्वसत्तावाद लाद्छन् भन्ने आरोपमा केही आधारहरु सुवेदी देख्नु हुन्छ । के छन् त उहाँले देख्नु भएका आधारहरु ?
‘धेरैले भनिरहेका छन् कि एमाले–माओवादको गठबन्धनले मुलुकमा अधिनायकवादको जन्म हुन्छ । यो आरोप कांग्रेसी र गैरकांग्रेसीले पनि लगाइरहेका छन् । यस्तो आरोप आइरहेको बेला केपी ओलीले कहिले पनि हामी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर हुँदैनौ भन्नु भएको छैन । उहाँले त अब हामी ५० वर्ष शासन गर्छौं भनिरहनु भएको छ । यो त रोबर्ट मुगावे, ह्युगो चाभेज हुन्छौं भने जस्तो भयो ।
दुई तिहाई बहुमत ल्याएर कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुने गरी संविधान संशोधन गर्छौं भनिसकेपछि यो विषय बढी चर्चामा आएको हो । यस्तो अवस्थामा आयो जब चीनमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अधिवेशनमा राष्ट्रपति सि जिन पिङले नयाँ धारणा लिएर आउनुभयो । त्यो धारणको प्रभाव त होइन ? भनेर शंका गर्ने अवस्था स्थापित भयो । त्यो धारणा आउनु र नेपालमा कम्युनिष्टहरु मिल्नुले शंका गरिएको छ ।
नेपालमा कम्युनिष्टहरुको गठबन्धन स्वभाविक छैन । अहिले एमाले–माओवादीको गठबन्धन मार्क्सवादी पश्चगमन भन्छु । मार्क्सवादीहरु अग्रगमनमा गए भने प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेर प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्छन् । पश्चगमनमा गए भने एकदलीय सर्वसत्तावाद लागू गर्न खोज्छन् । अहिले एमालेबाट मानिसहरु तर्सिएका छन् । लोकतान्त्रिक धारको एउटा खम्बा एमाले थियो । तर अहिले चुनावी गठबन्धनमात्रै नभएर माओवादीसँग पार्टी नै एकता गराउन खोजेपछि विषय फरक तरिकाले आएको हो । यसबाट एमाले मार्क्सवादी पश्चगमनमा जाला कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।
अहिलेको एमाले र माओवादीको गठजोडको सूत्रधार नेपालको चारकिल्ला भन्दा बाहिर तयार भएको हो । प्रचण्डले अबको निर्वाचनमा माओवादीको हालत पतला हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि उहाँले केपी ओलीलाई २ सय करोड दिएर गठबन्धन किनेका हुन् । किन्ने पैशा चीनको सरकारी कम्पनीले दिएको हो । चर्चा यहि छ । तर मसँग यसको प्रमाण छैन ।
केही अखबारले वामगठबन्धनको सूत्राधार चीन हो भनेर लेखे । चिनियाँ राजदूत तुरुन्तै शेरबहादुर देउवालाई भेट्न गएर हामीले होइन भन्न भ्याए ।’